င ဝန် န ဒီ: June 2013
မြန်မာ ကားအပြ တော်ရင်
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအရ သားနဲ့ အမိ။မောင် နဲ့နှမ မိသားစု ဝိုင်းဖွဲ့မကြည့်သင့်တာ ကို နားလည်ဖို့လို တာကို ဒီလို မျိုးပြောတော့
နိူင်ငံခြားကားတွေ လို ကြည့်ချင်သူတွေ ရှိမှာပါ ဆင်းရဲသား ကားတွေ ရိုက်ပြစေချင်ပါသည်
အဆင့်အတန်းတခု အရ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပေါ့
အဲလို ရိုက်ပြရဲ လို့ပြောတယ်လို့ ထင်ပါတယ်
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလစ်လျူရှူ ပြောသူ ဆိုတော့
နိူင်ငံခြားကား သီးသန့် ကြည့်သူ အတွက် ရိုက် ပြမယ့် နေ့မဖြစ်လာရင်တော့ အပြောနဲ့ အလုပ် တခြားစီ ဖြစ်မှာ စိုးရတယ်
ပြောရဲ မှ တော့ လုပ်ရဲပါစေ
မိသားစု အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်နေရာရာမှာတော့ နေရာရမယ်ထင်ပါရဲ့ 
အဝတ်အစားဖိုးသက်သာ ကားတွေ များများ ရိုက်နိူင်ပါစေ။ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံး အဝတ်မပါလေ ပိုကောင်းလေ ငွေကုန်သက်သာစေချင်သော သက်သက် ရယ်ပါ။အပြရဲ သူ အတွက် အပန်းမကြီးနိူင်ဘူး ထင်လို့ ပါ။
အပြောနဲ့အလုပ် သက်သေပြနိူင်ပါစေ။
ကောင်းမှုကို အားပေးသလို မကောင်းမှုကို လည်း အားပေးခြင်းဖြင့် ကောင်းမှုကို တန်ဖိုးတတ်စေအံ့။
ဂျပန် မှာ သွားသွားလာလာ မိမိ ပိုက်ဆံအိတ် ကို သတိထား
ဂျပန် မှာ နေထိုင်သူတွေ အတွက် အစစ ပြဿနာတွေ မရှိတတ်ပေမဲ့ တစ်ချို့အရာလေးတွေ သတိထားသင့်လာပြီ
ပိုက်ဆံအိတ် လွယ်သူတွေ အလွယ်တကူ ဘေးမှာလွယ်ထားတတ်သူတွေ လက်ဖြင့်ကိုင်ထားပြီး လမ်းလျှောက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်..
ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ ထိုးထားတတ်သူတွေ ပါ သတိထားသင့်တာထားရင် မှားမည်မထင်
မဖြစ်ရင်တော့ မဖြစ်နိူင်တာပါ ဖြစ်တော့မှာ ပြဿနာပိုကြာမှာထက် ကြိုတင်ကာကွယ်တာ ကပိုကောင်းပါတယ်...
မြန်မာပြက္ခဒိန် update ထပ်လုပ်ပြီးပြန်ကြည့် လို့ ရပါပြီ
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:08 AM No comments:
မလေးရှားက မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ ? မလေးရှားသို့ တရားမ၀င် ရောက်ရှိနေသူများ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လိုသူအားလုံး ပြန်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး ပြောကြား
ကလေး ၉သိန်း ကျော် ကျောင်းမတတ်နိူင်တာ နောက်က
ကလေး ၉သိန်းကျော် ကျောင်းမတတ်နိူင်တာ နောက်မှာ မြန်မာနိူင်ငံသား အနည်းဆုံး ၅ သိန်း ကျော် လုပ်အားခ အနိမ်ခံနေရတာ အသေအချာ ရယ်
အလုပ်လုပ်ရင်း ငွေမရှိ ဖြစ်နေတာပါ
အလုပ်က တဆင့် တာဝန်မဲ့ သူတွေ တာဝန် မယူပေးတာရယ်
လူအခွင့်အရေးပြောသူ တွေ လစ်လျူရှူနေတာတွေပါ
လှေလှော်ရင်း တတ် အဖျောက်ခံရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ၂၀၁၅ မှာ ပါမလာစေဖို့ ရယ်
လေကြီးမိုးကြီးထက် လေမှန်နေရာမှန် လေး ပဲ ဖြစ်စေဖို့ သက်သက်ရယ်ပါ
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် update လုပ်လျှင် ကြည့် မရတော့ပါ
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:50 AM No comments:
ဂျပန် မှာ သွားသွားလာလာ မိမိ ပိုက်ဆံအိတ် ကို သတိထား...
မြန်မာပြက္ခဒိန် update ထပ်လုပ်ပြီးပြန်ကြည့် လို့ ရပ...
မလေးရှားက မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုပြန်ရမလဲ ? မလေးရှားသ...